Shona - PM Proofreading
PM Proofreading ndeye Global Proofreading uye Editing Services Provider
PM Proofreading Services iri kutungamira yekuverenga uye kugadzirisa mabasa mupi akagadzwa muna 2012. Isu tinopa edu ekuverenga ekuverenga mabasa kune mapurofesa, vadzidzi vevadzidzi, vadzidzi vekupedza kudzidza, majenali, mayunivhesiti, mabhizinesi uye maindasitiri nyanzvi pasirese pasirese. Yedu masevhisi mhando-anovimbiswa kutendeseka, uye yedu yakarongedzwa system yakachengeteka uye yakavanzika kune izere rugare rwepfungwa. Mhinduro kubva kudzoka nevatengi vekunze inoratidza mukurumbira wedu wehunhu, inoshanduka shanduko uye nemitengo inonzwisisika.
Yedu Proofreading Maitiro
Yedu nzira yakarongedzwa inosanganisira kuverenga zvakadzama kuverenga (chiperengo / typos, girama, nyora) uye kugadzirisa (chimiro chemitsara, kubatana uye kuyerera, kushandiswa kwakapfupika uye kwakajeka kwemutauro, terminology yekudzidza / toni). Isu tinopurinda chinyorwa chako uye tinogadzirira kuti chinyatsoburitswa kana kudhindwa Isu tinoteedzera ese shanduko dzakaitwa kubasa rako, kuitira kuti iwe ugone kupfuura pamusoro pese shanduko dzakaitwa uye sarudza kana uchibvuma kana kuramba shanduko yega yega. Ose ari maviri akateedzerwa shanduko vhezheni uye yekupedzisira yakachena vhezheni yechinyorwa chako inodzoserwa kwauri. Isu tinowedzerawo zvirevo pane kwaunogona kunatsiridza kunyora kwako. Yekupedzisira yakasimba yehutano vimbiso cheki inozoitwa neyechipiri proofreader kuverengera kuti chinyorwa chinodzoserwa chisina kukanganisa.
Vedu veChirungu Proofreaders
Chikwata chedu chine nyanzvi-dzenyaya, vane hunyanzvi hwepamberi padanho raTenzi nePhD kubva kumayunivhesiti epamusoro. Wese muverengi wekuverenga anonyanya kugadzirisa mune yakatarwa chirango, uye aigona kugadzirisa zvinyorwa mukati mehukuru hwehunyanzvi hwavo. Nenzira iyi muverengi anokwanisa kunyatsogadzirisa zvinyorwa, sezvo iye achiziva mazwi akakosha uye mazwi akasarudzika anoshandiswa mune iwo chaiwo munda. Proofreaders kubva kune yega kuraira kunowanikwa.
Vane makore akati wandei ekuongorora kuverenga, uye vane hunyanzvi hunodiwa kuti nyatsoongorora basa rako kusvika pakukwana, uku panguva imwechete uchichengeta zvese zvairehwa uye kubata kwako wega. Nhengo dzechikwata chedu chimwe nechimwe chinosarudzika nzira yekutsvaga vanhu, uye vanotevedzera zvinozivikanwa zvemhando yepamusoro zvekuongorora zviyero senge izvo zvinoshandiswa ne’Chartered Institute of Editing uye Proofreading ‘(CIEP). Dzimwe dzenhengo dzechikwata chedu dzakanyorwa pazasi.
Kubatana pamwe neGlobal mayunivhesiti
Isu tanga tiri mukubatana kwakanangana nevadzidzi vekupedza kudzidza, mapurofesa nevashandi vezvidzidzo kubva kuYunivhesiti pasirese pasiti kubva 2012. Ndokumbira kuti utibate kana uchida kubatana nesu.